သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး | Page4| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
မှတ်ဉာဏ်ပြန်ကောင်းစေမည့် အချက် 8 ချက်
5.12.2016 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
1. သကြားဓာတ်နည်းသော အစားအစာများစားသုံးပါ။
2. Omega-3 ပါဝင်သည့်ငါးများကို စားသုံးပါ။
20.11.2016 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း လိုက်ပြီးအိုမင်းရင့်ရော်လာပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာနဲ့ ဖျော်ရည်တွေစားသောက်မယ်ဆိုရ...
18.11.2016 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
လက်ဖျားခြေဖျားအေးစက်ခြင်းဟာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပြီး လူငယ်လူရွယ်တွေမှာဖြစ်...
အသက်ကြီးလာချိန်မှာ ကိုယ်အလေးချိန်အလွန်အမင်းကျမသွားအောင် ထိန်းသိမ်းပါ
13.11.2016 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစာစားချင်စိတ်လျော့နည်းသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ...
အသက်ကြီးလာချိန် အစားအသောက်ပျက်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းများ
11.11.2016 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
အစားအသောက်ပျက်ခြင်းသည် သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သော ဘိုးဘွားအများစုမှာ အစားစာချင်စိတ်မရှိသောကြောင့် အစ...
6.11.2016 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
အမျှင်ဓာတ်က သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ကောက်ပဲသီးနှံ စတဲ့အပင်ထွက်ပစ္စည်းတွေကရရှိပြီးတော့ ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်မှာ ရေမှာပျေ...
အသက်အရွယ်ကြီးလာချိန်မှာ မိသားစုနဲ့အတူနေခြင်းက သေဆုံးမှုကိုလျော့ကျစေနိုင်
3.11.2016 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
အသက်ကြီးလာချိန်မှာ မိသားစုတွေ မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူနေရမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးပိုကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ အထီးကျန်သူတွေဟာ စိတ်ကျရောဂ...
ရယ်ပါ…တတ်နိုင်သမျှ စိတ်ရောကိုယ်ပါလွတ်လွတ်လပ်လပ် ရယ်လိုက်ပါ…
27.10.2016 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
ရယ်မောခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရယ်မောခြင်းနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းတွေကြောင့် သက်ကြီးပိုင်းတွေရဲ့စိတ်ကျန်းမ...